Amerika Latina: Niresaka momba ny fahantrana ny Blog Action Day · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2018 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Português, srpski, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nankalazaina ny 15 Oktobra 2008 ny Blog Action Day. Tamin'io daty io, nampanantena ny hamoaka lahatsoratra mikasika lohahevitra iray ireo bilaogera manerantany. Ny fahantrana no lohahevitra nofidiana tamin'ny taona 2008. Natao ity fanentanana ity tamin'io andro io mba “hitarihana ny fifanakalozan-kevitra, mba hanairana ny saina, mba hisian'ny adihevitra manerantany ary mba hakana vahana amin'ny olana manan-danja”.
Indro misy sombiny tamin'ireo lahatsoratry ny bilaogera avy any Amerika Latina, izay nandray anjara tamin'ny hetsika.
Manontany tena i Osval ny antony mahatonga ny fireneny matetika ho voasokajy ao anatin'ireo firenena mahantra indrindra manerantany:
Firenena manana loharanon-karena sy varavarana misokatra handrosoany i Paragoay, ​​manana orinasa mpamokatra herinaratra miisa telo izahay, anisan'izany i Itaipú, izay lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Manana ny tany fambolena maro izahay izay tsara indrindra sy lonaka indrindra, ny loharano maro manerana ny firenena, ary ny orinasa famokarana simenitra sy vy, … koa nahoana izahay no heverina ho iray amin'ireo firenena mahantra indrindra aty Amerika Latina? Tena tsy fantatro.
Manantena ny hahita fiovana izahay amin'ny taona hoavy manaraka rehetra, ary miaraka amin'ny fanampian'ny governemanta vaovao izany. Mila olona azo atokisana fotsiny izahay, mpitantana matotra, olona izay miasa ho amin'ny tombontsoan'ny firenena iray manontolo fa tsy ho amin'ny tombontsoany manokana. Fa nahoana izahay no mbola mampiasa ihany ny lafaoro mandeha amin'ny etona kanefa efa manana orinasa mpamokatra herinaratra miisa telo eto amin'ny taninay!!
Manolotra rohy mankany amin'ireo bilaogera Kolombiana hafa izay nandray anjara tamin'ny Blog Action Day i Sandel, anisan'izany i DianaCats . Mihevitra izy fa maro ny olona no mifantoka loatra amin'ny zavatra ara-materialy ary tokony hijery akaiky ny tsirairay amintsika ny fananany ary hizara izay tsy ilaina amin'ny hafa. Juliana Rincón avy ao amin'ny Medea Material nizara mailaka avy amin'i Andrea, mpikambana iray ao amin'ny vondrona Hiperbarrio , tetikasam-pampitam-baovaon'olon-tsotra ao an-tanàndehiben'i Medellín, izay nikarakara indray ny fanangonana kilalao ho an'ireo ankizy ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Choco .
Mihevitra i Jorge Landa fa tsy natao ho an'ny fitantanana ny Blog Action Day, fa natao kosa hanombohana ny fisaintsainana manokana :
Androany, tsy nieritreritra ny hamarana ny fahantrana eto amin'izao tontolo izao mihitsy aho, tsotra loatra ny finoana fanovàna tahaka izany amin'ny zava-misy marina, saingy antenaiko fa hanohy hanova ny zava-misy isika mba hanatanterahana ny zava-misy toy izany.
Momba ny Blog Action Day, mihevitra i Menos Canas fa sarotra ny miresaka momba ny fahantrana, tsy noho izany tsy misy, fa satria sarotra ny hamantarana hoe aiza no hanombohana azy. Mahafantatra tsara hoe aiza no hanombohana izany i El Útero de Marita ary mihevitra izy fa tsy mety resahana ny momba ny fahantrana raha tsy mampifandray izany amin'ny olana mahakasika ny kolikoly .
Mandinika momba ny fahantrana ao amin'ny fireneny i Samuel Bran:
Zava-misy hitanay isan'andro isan'andro ny fahantrana eto amin'ny firenenay, El Salvador. Isan”andro, manatri-maso ny zava-misy sarotra sy mampalahelo izahay, efa imbetsaka ireny tantara ireny no hita ao amin'ny bilaogy “Andando a Pie“, kanefa tsy misy ny fihetseham-po. Rehefa mieritreritra ireo tsy manana toeram-ponenana na ireo mitady sakafo any amin'ny fitoeram-pako… inona no ataontsika ho an'ireo rahalahintsika Salvadoreana ireo? Raha ny marina aza, na dia tsy afaka manangona azy rehetra ireo aza isika, dia fara faharatsiny mba miezaka indray mandeha aloha manao izany. Hanatsara ny fiainana eto amin'ny firenentsika izany.
Eto amin'ity firenena misy fahasamihafana marobe ity, mahatsiaro ny fitsidihany ny tanàna kely iray antsoina hoe Marale i Hugo Chinchilla ary nihaona tamin'ireo olona sahirana sy noana izy. Ho azy kosa, manontany tena ny momba ny vola lanin'ny mpanao politika izy mba handoavana ny rendrarendrakelin'izy ireo, kanefa sady fantany fa miaina toe-javatra faran'izay henjana ny mpiray tanindrazana aminy. Nahita ny laharana misy azy tao amin'ny lisitry ny Global Rich (ireo olona manankarena indrindra erantany) i Aaron Ortiz avy ao amin'ny Pensieve. Namaly i Laurie tamin'ny alalan'ny fanolorana ny rohin'ny tantaran'ny raim-pianakaviana iray izay miady mba hividy ronono vovony ho an'ny zanany kely.
Misaotra an'i Juliana Rincón ho an'ny rohy tamin'ity lahatsoratra ity.